Maxay ka dhignayd labadii gool ee xalay laga diiday Kooxda Chelsea kulankii ee Man United? – Gool FM
Haaruun February 18, 2020
(London) 18 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa kulankii xalay ay guuldarrada kala kulmeen 2-0 Manchester United, waxaa laga diiday labo gool oo ay dhalisay.
Chelsea ayaa kulankaas labada gool oo ay dhaliyeen waxaa meesha ka saartay aaladda VAR, waxaana xalay Blues ay noqotay kooxdii labaad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2019-20 ee kulan gudihiis laga diido labo gool.
Zouma iyo Giroud ayaa Chelsea u dhaliyey labada gool ee laga diiday xalay kulankii ka dhacay Stamford Bridge oo ay khasaarada 0-2 kala kulmeen Man Utd, Blues ayaana sidaas ku noqotay kooxdii labaad ee Premier League oo labo gool uu ka diido VAR hal kulan gudihiis.
Azpilicueta ayaa kala tuuray Williams ka hor inta uusan Zouma goolka Blues u dhalin 55’daqiiqo, halka Giroud madax uu dhaliyey lagu sheegay inuu cagta kula jiray garab dhaafka daqiiqaddii 77-aad, labadaas gool ayaana meesha laga saaray.
Kulanka kale ee horyaalka Premier League oo muuqaal caawiyaha garsooraha ee VAR uu ka diiday labo gool oo kooxi dhalisay waa ciyaar dhexmartay bishii December kooxaha Sheffield United iyo Brighton.
Sidee u aragtaa go’aannada VAR ee kulankan?